John Verdon, munyori anononoka uyo akawana anoshuviwa Bestseller | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Mabhuku, Nhema nhema
Quote naJohn Verdon.
John Verdon inyanzvi yekuAmerican inozivikanwa zvikuru yezvakavanzika zvinonakidza zvakateedzana naDetective Dave Gurney.. Isati yatanga kunyorwa zvinyorwa, Funga nezve nhamba (Crown / Random House; 2010), munyori weNew York aive nebasa rakareba uye rakabudirira munyika yekushambadzira. Zvisinei, munyori pachake anotaura pawebsite yake kuti "Ndaigara ndichida kuva mumwe munhu."
Saka, bhuku rake rekutanga - rinotengeswa muSpanish se Ndinoziva zvauri kufunga- zvaireva budiriro yakakwana kupinda munyika yetsamba. Chinyorwa chinopupurira mazhinji emitsara tenzi yakagadzirwa nevanyori vane simba muVerdon: Sir Arthur Conan Doyle, Ross McDonald naReginald Hill.
1 Hupenyu hwaVerdon: iyo American kurota
1.1 Zvakavanzika pagomo
2 Instant yakanyanya kutengesa
3 Anononoka, asi munyori ane ruzivo. Mamwe emabasa ake.
3.1 Iyo isingagumi fomula?
3.2 Kudzikama zvishoma
3.3 Iwe uchapisa here mudutu? Zvakanakisa zvaJohn Verdon?
4 Kutengesa Vs Hunhu: Iyo Dhijitari Isingaperi
Hupenyu hwaVerdon: iyo American kurota
Kubva pane yake biography, Verdon, nenzira yake, anga ari protagonist werudzi rweiyo American Kurota. Akazvarwa muNew York muna Ndira 1, 1942, akapedza makore angangoita makumi matatu achinyora zvinyorwa zvekushambadzira kumasangano eNew York. Pane imwe nguva yarega basa kubva munyika ye mavaraAkaisa simba rake pakuvakwa kwemidziyo uye kuveza zvese.
Mushure memakore gumi achishanda nezvinhu zvemuti, mukadzi wake akagamuchira mudyandigere (iye mudzidzisi). Nekudaro, zvave zvisina kubviswa kune iyo Bronx uye iyo Big Apple, vaviri vacho inosarudza kugara zvakanaka mukabhini muCatskill Mountains. Iyo inharaunda yekumaruwa, ichiri mudunhu reNew York, ine runyararo uye yakanyarara nharaunda.
Hupenyu hwekurega basa hwakatora Verdon nguva yakawanda yekuverenga. Chaizvoizvo, Mabhuku agara ari ehusimbe chishuwo maari, asi chakavanzwa nemabasa ake ekare ezuva nezuva ... Iyo yekuvhura inova yakave yaanofarira mhando, ine mutikitivha icon kumberi: Sir Arthur Conan Doyle's Holmes.
Mudzimai wake, achiona kushingaira kwemunyori wenguva yemberi kudya zvinonyengera zvemapurisa mumwe mushure meumwe, akakwanisa kumunyengetedza kuti anyore nyaya yake. Mushure memakore maviri ekuedza kwakasimba, nyika yakasangana naDavid Gurney, mukuonekwa kwake kwekutanga Ndinoziva zvauri kufunga (2010).
Instant yakanyanya kutengesa
Ndichadzora zviroto zvako.
Unogona kutenga inoverengeka apa: Ndichadzora zviroto zvako
Nguva Funga nezve nhamba haana kuenderera mberi nekuzvimba zviri pamutemo chikamu che Best Mutengesi, Kutanga kwaJohn Verdon kwakabudirira. Uyezve, vashoma vanyori vanogona kuzvirumbidza nhamba yekutanga mukutengesa ne "yavo yekutanga basa." Ndinoziva zvauri kufunga Iye "akabira" kufarira kwevaverengi mune zvakavanzika.
Zvinoenderana neongororo, zita iri rakakwanisa kuzorodza zvakavanzika zvinogara zvichinaka zve "makamuri akavharwa", nekudaro zvichikonzera kuwanda kwevaverengi. Kunyangwe Verdon - akati simbei uye asina hanya - akatanga kunzwisisa kukura kwechisikwa chake apo mupepeti wake akamudaidza nguva pfupi yapfuura. Icho chikumbiro: imwe nyaya ine imwechete protagonist.
Anononoka, asi munyori ane ruzivo. Mamwe emabasa ake.
Zvishuwo zveruzhinji zvaive nekukasira. Ehezve, iko kukuru kukosha kwemupepeti kwaive kubheja pane (sezviri pachena) isingagumi "zvakasikwa". Ringori gore gare gare, yechipiri yeGurney-nyeredzi adventures yakarova zvitoro zvemabhuku: Vhara Maziso Ako Zvakasimba (inotengeswa muchiSpanish se Usavhure maziso ako).
Mhedzisiro yacho: mutengesi wakanyanya mune rese izwi reizwi. Nhamba yekutanga kwemavhiki akati wandei munyika dzakasiyana, kumativi ese eAtlantic Ocean. Saizvozvowo, zita rechipiri raVerdon rakaratidza shanduko yakajeka munzira yekukura kwekunyora uye chengetedzo huru pakurangana.
Iyo isingagumi fomula?
Chikamu chechipiri chaDave Gurney chakafungidzirwa zvirinani pane chekutanga. Nekudaro, kuuya kwekutakura kwakawanda kubva kuna mutikitivha waVerdon yaive nyaya yenguva. Kwapera gore chitsauko chechitatu chesaga chakaburitswa: Regai Dhiyabhorosi arere -Siya dhiabhori (2012).
Nekudaro, zvakasiyana nezvakaitika nekare kuburitswa, panguva ino kuvakwa kwehurongwa kwakaratidzika kunge kunogadzira uye kushoma kwemvura. Saizvozvo, munyori akapa neakatanga, pamwe achishandisa nzira dzakabvumikiswa kuti abudirire kuita basa. Chero zvazvingaitika, vateveri vake vakafara uye, chokwadika, muparidzi zvakare.
Akazvipira kuzere kubasa rake nyowani, aishanya kutenderera, kudhindisa misangano uye kuneta kukuru, Verdon akatora makore mashoma kuti aburitse nyowani nyowani. Con Usavimba Peter Pan (2014) -Peter Pan Anofanira Kufa, zita rekutanga muChirungu - munyori weAmerica akadzorera kutsva kwemitsetse yake, pamwe nekuratidzira fomati shoma uye yakawanda yekugadzira.
Bhuku rinotevera, Ndichadzora zviroto zvako (2015) -Wolf gungwa, zita rekutanga muChirungu - rakasiyana kubva kune vamutangira nepedyo nepfungwa yekufungidzira. Zvakadaro, Verdon akakwanisa kuchengeta vaverengi pamwe chete nehunhu hwake munyika chaiye, kunyangwe hazvo kurohwa kurota.
Muchapisa mudutu Akanakisa aJohn Verdon?
Unogona kutenga bhuku pano: Muchapisa mudutu
Vanyori vasina simba vemunyori vaifanira kumirira kusvika 2018 kuti vanakidze kuferefeta kunotevera nemupurisa mutsiva David Gurney. Rwizi chena ruchipisa (zita rekutanga muChirungu) mupurisa mune zvese zvakajairwa. Asi nemamiriro akakodzera echokwadi transcendental basa nekuda kweiyo X-ray yeUnited States yaDonald Trump.
Iri bhuku rinofumura gangaidzo rekuAmerican: rusaruraganda, hutsinye hwemapurisa, yakasviba system yekutonga, vatungamiriri vanoshandisa simba ravo zvisirizvo ... Pakati penzanga isingakwanise kuzvitarisa uye kunyura mukutsiva uye nemhirizhonga isingaperi. Munyori anopedzisa zvese nekuguma kunoshamisa.
Kutengesa Vs Hunhu: Iyo Dhijitari Isingaperi
Mazita maviri ekutanga aVerdon akagamuchirwa nemufaro (kwete chete nevateveri venhau dzematsotsi). Gare gare, iko kunyorera kwekunyora Siya dhiabhori, wechitatu weanomwe (muna 2020 wechinomwe wakaburitswa, Ngirozi nhema), Akaisa patafura gakava iro richizouya nekukurumidza kana kuti gare gare. Ndeapi akakodzera aJohn Verdon semunyori?
Munyori weNew York anotora zvese zvakaitika kubvira kuvambwa kwe Ndinoziva zvauri kufunga zvakasikwa chaizvo. Iye zvirokwazvo anotenda vaverengi vake nekumubvumidza kuita chiitiko chinopfumisa (munzira dzese dzetemu) uye kupfuudza kuchembera pasina kunetseka. Kune avo vanoramba kuverenga mabhuku ake semunyori webhizinesi.
Uye iwo mubvunzo mumwe chete unogara uchimuka: pane chimwe chinhu chakakanganisika neicho?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » John verdon